Waaxda cadaaladda ee Maraykanka oo taageertay xayiraaddii socdaalka | Baydhabo Online
Waaxda cadaaladda ee Maraykanka oo taageertay xayiraaddii socdaalka
Waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka ayaa difaacday xayiraadihii dhanka socdaalka ee madaxwayne Donald Trump, waxayna ku baaqday in maxkamadda racfaanku ay ayiddo go’aankaas iyadoo fiirinaysa danta amaanka qaranka.
Qoraal 15 bog ka kooban ayay ku faahfaahisay in “in go’aanka madaxweynuhu uu sharciga waafaqsan yahay” isla markaasna uusan ka dhignayn in Muslimiinta la mamnuucay.
Madaxweynaha ayaa ugu mudan in uu qaato go’aanada ammaanka qaranka
In ay “khalad tahay” in go’aankan lagu sheego in Muslimiinta la mamnuucayo maadaama todobadaas dal loo xusay halista argagixiso ee ka jirta.
Sidaas daraadeed in amarku uu “dhexdhexaad yahay uuna ixtiraamayo diinta”
Jahwareer ka dhacay garoomada diyaaradaha.
Go’aanka uu soo saaray madaxweynaha Maraykanka 25kii bisha koobaad ayuu kaga dhabeeya balanqaadkii uu sameeyay markii uu ku jiray ol’olaha doorashada, markaas oo uu sheegay in uu sare u qaadi doono xayiraadaha dadka soogalaya Maraykanka.